Thwebula G Data Antivirus 25.5.6.20 – Vessoft
WindowsUkuphephaAntivirusG Data Antivirus
Ikhasi elisemthethweni: G Data Antivirus
I-Wikipedia: G Data Antivirus
I-G Data – isofthiwe esisekela izindlela zokuphepha ezihlakaniphile nezici ezihlelekile zokuphepha kwekhompyutha. Isofthiwe inikeza izinga elihle lokuvikeleka kumagciwane ahlukene, ama-rootkits, i-ransomware, i-spyware kanye ne-malware ngenxa yobuchwepheshe bwanamuhla ababona izinto eziyingozi ngempawu zabo zokuziphatha kanye namasignesha. I-G Data Antivirus inezinhlobo ezahlukene zokukhethwa kwegciwane, njengokuhlola jikelele kwekhompiyutha, ukuskena izindawo ezithile zenkinga, inkumbulo kanye nokuhlola kwe-autorun, ukuhlola okuhleliwe, isheke semidiya esikhiphekayo. I-G Data Unqulo wesi arab ivimbela izixhumanisi eziyingozi ezingeni lenethiwekhi futhi ithola amawebhusayithi e-fraud azama ukweba imininingwane yokukhokha yangasese. Isofthiwe ihlola i-imeyili yezinamathiselo ezinonya nokuqukethwe okusolisayo. I-G Data Antivirus ibuye iqukethe umthamo wokuvikela osebenzayo ovikela ikhompyutha yakho ngokubhekene nokukhubazeka kokuphepha kwisofthiwe efakiwe.
Izinga eliphezulu lokutholakala nosongo
Ukuvikelwa ngokumelene nobugebengu bokuphinga, ama-keyloggers, i-ransomware
I-web-surfing ephephile ne-inthanethi-ebhange
Thwebula G Data Antivirus
Amazwana ku G Data Antivirus
G Data Antivirus software ehlobene
I-HijackThis – isoftware yokususa ama-virus, ama-spyjans, ne-spyware. Isoftware iskena izinsongo ezingene ohlelweni zingumphumela wokusebenzisa inethiwekhi.
The popular phakathi gamers emulator inethiwekhi yendawo. Isofthiwe iqinisekisa ukuxhumana okuphephile nabanye abadlali futhi ine amathuluzi amaningi ukwenza kwamukeleke.